समाज – Page2– Nagarik Today
न्याय नपाए पछी निर्मलाका बुवाले मानसिक सन्तुलन गुमाए ( भिडियो सहित )
काठमाडौँ,७ मङ्सीर । न्याय नपाए पछी निर्मलाका बुवाले मानसिक सन्तुलन गुमाएका छन । आज कान्चन्पुर मा अचानक सडकमा जथाभावी बोल्दै 'छोरीको हत्यारा मुर्दाबाद' भन्दै घर सडक र बजार वरपर हिंडेका थिए । उनलाई सम्भाल्न महिला अधिकारकर्मी परिवार जनलाई निकै हम्मेहम्मे परेको थियो । आफु संगै रहेका एक महिला अधिकारकर्मी माथि हातपात गरेका थिए । साथै सडकमा हिंड्ने अरु ब्यक्ती माथि पनि हात उठाएका थिए । canadian-pharmacy-testim. निकै प्रयास पछी प्रहरीको सहयोगमा उनलाई धर्ना स्थलमा लगिएको थियो । निर्मलाको न्यायका निम्ती जिल्ला प्रशासन कार्यालय कान्चन्पुर अगाडि कार्तिक २५ गते देखी दबाव दिन पन्त परिवार र अधिकारकर्मीले धर्ना दिदै आएका छन । भिडियो हेर्न तलको लिन्क क्लिक गर्नुहोस् :- ﻿
क्रिश्चियन धर्म प्रचारक अमेरिकी नागरिकको भारतको दुर्गम आदिवासी क्षेत्रमा हत्या
नागरिक बिचार, मुख्य समाचार, समाज
नयाँदिल्ली, ७ मंसिर । भारतमा क्रिश्चियन धर्म प्रचार गर्ने एक अमेरिकी नागरिकको हत्या भएको छ । अमेरिकी नागरिक जोन अलेन चाउको भारतमा हत्या भएको हो । उनी क्रिश्चियन धर्म प्रचारका लागि भारतको दुर्गम आदिवासी क्षेत्र अन्डामन टापुमा पुगेका थिए । उनको त्यहाँ शंकास्पद रुपमा हत्या भएको हो । यहाँका आदिवासीले प्रयोग गर्ने धनुष वाणको प्रहारले चाउको हत्या भएको बुझिएको छ । यस क्षेत्रमा विदेशीले यस्ता हतियार बोक्न प्रतिबन्ध लगाइएकाले पनि चाउको हत्या अन्डामनका आदिवासीले नै गरेको बताइन्छ । उनले क्रिश्चियन धर्म प्रचार गरेका कारण उनको हत्या गरिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । चाउको आफ्नो सामाजिक संजालमा भने आफू एक इसाई धर्ममा विश्वास गर्ने फिरन्ते भनी उल्लेख छ । सोसल मिडियामा इसाइ धर्ममा विश्वास गर्ने जस्ता अभिव्यक्ति र भनाइ उल्लेख भएका आधारमा उनी धर्म प्रचारकै कारण मारिएको हुनसक्ने बताइएको छ । चाउले भिक्टोरियन
शेरबहादुर सिंह भीमदत्तनगर, ७ मङ्सिर/ कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका–२ की १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्यारालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै लामो समयदेखि दौडधुपमा रहनुभएका उहाँका बुबा यज्ञराज पन्त र आमा दुर्गादेवी पन्त अन्ततः दबाबका निम्ति धर्नामा बस्नुभएको छ । यसअघि काठमाडौँ पुगेर प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री हुँदै प्रतिपक्षी दलका नेतासम्मलाई छोरीको हत्यारालाई कारवाहीको गुहार मागेका निर्मलाका बुवा÷आमाले हत्यारालाई सार्वजनिक गर्न माग गर्दै दुई सातादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि धर्नामा बसेयता सांसद, नेतादेखि आम सर्वसाधारणको ध्यान त्यहाँ केन्द्रित भएको छ । विहीबार बेलुकासम्म धर्नास्थलको नोटकपीमा करीब एक हजार बढीले न्यायको आन्दोलन भन्दै ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । गृहनगरको प्रशासन अगाडि धर्ना बसेका बुबाआमालाई भेट्न पछिल्लो केही दिनयता राष्ट्रियस्तरका नेताको दौ
Nov222018 by suchanapatiNo Comments
फोटो फिचर, मुख्य समाचार, समाज
राँझा, ६ मङ्सिर । नेपालगञ्जस्थित पुनर्निर्मित रानीतलाउ आन्तरिक पर्यटकीयस्थल बन्दै गएको छ ।नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–८ स्थित रानी तलाउको पुनर्निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएपछि अहिले यहाँ घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ । प्रत्येक दिन ३०० भन्दा बढी मानिस रानीतलाउ अवलोकन गर्न आउने गरेका छन् । बिदाको दिन भने भ्याइनभ्याई हुने गरेको रानीतलाउ सञ्चालनार्थ वडा कार्यालयबाट जिम्मेवारी पाएका कर्मचारी ऋषि मिश्राले बताउनुभयो । “अरू बेलाभन्दा बिदाको बेला धेरै मान्छे आउने गरेका छन्,” मिश्राले भने, “बिदाको दिनमा एक हजार ५०० भन्दा बढी मान्छेले टिकट काटेर घुम्ने गरेका छन् ।” बिदाका दिनमा बच्चासहित सपरिवार घुम्न आउने भएकाले धेरै घुइँचो हुने गरेको छ । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले दिनभर काममा खटिने उद्योगी, व्यापारी, पेशाकर्मी, गृहिणी र विद्यार्थ
नयाँ श्रम कानूनबाट लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा
काठमाडौँ, ६ मङ्सिर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा हालै जारी श्रमसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै कानूनका कारण देशमा लगानीको वातावरण बनेको बताएका छन् । श्रमिकहरूको वर्तमान आर्थिक अवस्था विषयमा आज जापानको टोकियोमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले श्रम र श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नयाँ कानूनमा भएको नयाँ व्यवस्थाबाट देशमा लगानीको वातावरण बनेको धारणा राखे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको रोजगारदाता परिषदको अध्यक्षसमेत रहेका ढकालले देशमा उद्योगधन्दाको स्थापना र विकासका साथै वैदेशिक लगानीका लागि पनि यी कानूनले नयाँ वातावरण सिर्जना गर्ने र श्रमसँग जोडिएका विविध समस्या हल गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा नेपालको आर्थिक क्षेत्रले गरेको बताए । यी नयाँ कानूनी व्यवस्थाले श्रमिकसँग जोडिएका विभिन्न खाले समस्या सम्बोधनका लागि समन्वय गर्न महासङ्घलाई पनि सहयोग पुग
पोखरा, ६ मङ्सिर । पदयात्रा पर्यटनका लागि विश्वमा नै विशिष्ट पहिचान बनाएको अन्नपूर्ण सेरोफेरोमा बर्षेनी पदयात्राका लागि पुग्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । नेपालका विभिन्न पदमार्ग मध्येमा आकर्षक एवम् सबैभन्दा फराकिलो संरक्षित क्षेत्र रहेका कारण मनमोहक दृश्यावलोकनसहित पदयात्राका लागि यस क्षेत्रमा पर्यटकको आकर्षण बर्षेनी बढ्दै गएको हो । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण २०७२ र २०७३ मा पदयात्रामा आउने पर्यटकको सङ्ख्या घटे पनि पछिल्ला दुई वर्षमा भने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । सेप्टेम्बरको मध्यदेखि डिसेम्बरको मध्यसम्म नै अन्नपूर्ण क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा पदयात्री पर्यटक आउने गरेको ट्रेकिङ एजेसिन्सज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सङ्घका अध्यक्ष हरि भुजेलले जानकारी दिए । पदयात्रामा आउने पर्यटकका लागि पदयात्री व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (टिम्स) कार्ड अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकामा
काठमाडौँ, ६ मङ्सिर । देशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । review of viagra websites. महाशाखाले आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी विज्ञप्ति निकालेर देशका पहाडी क्षेत्रमा बदली र वर्षाको सम्भावना औँल्याएको हो । आज दिउँसो पहाडी भेगमा सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्का वर्षा हुने सम्भावना छ भने बाँकी स्थानमा सामान्यतया सफा रहने छ । रातको समयमा पनि पहाडी भेगमा आंशिक बदली रहने र बाँकी भागमा सामान्यतया मौसम सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ । भोलि शुक्रबार देशको पहाडी भेगमा आंशिक बदली रहने सम्भावना छ भने बाँकी भेगमा सामान्यतया सफा रहने तथा मङ्सिर ८ गते देशभर मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ । महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार आज काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम २२ र न्यूनतम तापक्रम ९ डिग्री सेल्सियस रहेको छ । सबैभन्दा बढी विराटनगरको अधिक
बाँके जिल्लामाआर्थिक वर्षको अहिलेसम्म सडक दुर्घटनामा परी २३ ले ज्यान गुमाएका छन्
नेपालगञ्ज, ६ मङ्सिर । बाँके जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म सडक दुर्घटनामा परी २३ ले ज्यान गुमाएका छन् । how do porn stars get viagra. जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार सडक दुर्घटनामा परी १४ पुरुष, आठ महिला र एक बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन् । ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक हीरेन्द्र रोकायका अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा धेरै सडक दुर्घटना कोहलपुरमा हुने गरेको छ । दुर्घटना हुने सवारी साधनमध्ये मोटरसाइकल पहिलोमा पर्दछ । जथाभावी र प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा सवारी साधन गुडाउनाले पनि यस्ता घट्ना बढ्न थालेको जिल्ला ट्राफिक प्रमुख रोकायको भनाइ छ । साथै सडकका छाडा पशु चौपाया, सवारी चालकलाई ट्राफिक नियमको ज्ञान नहुनु र नियमनकारी निकायको उदासीनताले सडक दुर्घटना बढ्दै गएको छ । जिल्लामा ट्राफिक जनशक्ति पनि कम छ । कम जनशक्ति हुँदा ट्राफिकसम्बन्धी तालिम लिएका व्यक्तिलाई अहिले
अलैँचीले विद्यार्थीको सङ्ख्यामा वृद्धि
लमजुङ, ६ मङ्सिर । गाउँघरका मानिस शहरबजार पसेसँगै खाली जस्तै भएको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाको एक विद्यालयमा विद्यार्थी आउन थालेका छन् । मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–७ छिनखोलाका स्थानीयवासीको सक्रियतामा गाउँमा अलैँची खेती विस्तारसँगै गाउँमै रहेको सृजना प्राथमिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन थालेको हो । कक्षा १ देखि ३ सम्म रहेको उक्त विद्यालयमा विस्तारै विद्यार्थी सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । गत वर्ष चार जना मात्र विद्यार्थी रहेको सृजना प्राविमा यो वर्ष १४ विद्यार्थी नियमित विद्यालयमा आउने गरेको विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नौजङ्ग गुरुङले बताए । उनका अनुसार दुई विद्यार्थी कहिलेकाहीँ मात्र विद्यालय आउँछन् । गाउँघरमा नै बिस्तारै शहर बजारको सुविधा पाउन थालेपछि बजार झरेका गाउँमा नै बस्न थालेपछि विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको उनले बताए । “गाउँका प्रत्येक घरमा पानीको धारा जड
निर्मलाका निम्ती न्यायको लडाईं ११ औं दिन, सरकार संकाको घेरामा दिन दिन
काठमाण्डौं,५ मङ्सीर । बलात्कार पछी हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको न्यायका निम्ती उनको बाबुआमाले धर्ना दिएको पनि ११औं दिन पुगिसकेको छ । बुधवार धर्ना स्थल महेन्द्रनगरमा नयाँ शक्ती पार्टी बर्दियाको नेता कार्यकर्ता आई एक्यबद्दता जनाए । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा पुर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले पनि निर्मलाका बाबुआमाको स्वास्थ्य स्थिती बारे जानकारी लिँदै एक्यबद्धता पुष्तिकामा हस्ताक्षर गर्दै लेख्नु भयो । "निर्मला पन्त नेपाल भरिका उत्पिडन,शोषण र अपराधमा परेकाहरुको साझा नाम र परिचय हो । "निर्मलाका निम्ती न्याय" यो लडाईं त्यसैले निर्मलाको पिता र माताको पारिवारिक लडाईं मात्र होइन समानताको लागि अधिकारको लागि भएको यो लडाईं सबै न्याय प्रेमिहरुको संघर्ष हो । यो संघर्ष अपराधीका बिरुद्धको हो,अपराधीलाई संरक्षण गर्ने प्रत्येक ब्यक्ती अपराधी नै हो । अपराधीलाई दण्ड दिन हामी सबैको प्रतिनिधिका रुप